Sheekh Shariif & Meles Zinaawi oo Adis Ababa kulan xasaasi ah ku yeeshay – SBC
Sheekh Shariif & Meles Zinaawi oo Adis Ababa kulan xasaasi ah ku yeeshay
Posted by editor on April 16, 2011 Comments
Madaxweynaha dowladda KMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed & Ra’isalwasaaraha Ethiopia Meles Zanawi ayaa magaalada Adis Ababa waxay ku yeesheen kulan lagu tilmaamay in uu yahay mid xasaasi ah oo ku aadan arimaha dawlada Soomaaliya gaar ahaan xaaladaha siyaasada iyo amniga.
Kulankaasi ayaa si gaar ah waxaa loogu saaray diirada shirkii dhawaan magaalada Nairobi ka dhacay ee ay ka qayb galeen xubno ka mid ah dawlada KMG ah ee Soomaaliya isla markaana khilaaf ka dhexdhaliyey masuuliyiinta ugu sareysa dawlada KMG ah.
Lama oga mawqifka dhabta ah ee Itoobiya ka qabto khilaafka madaxda dalwada gaar ahaan labada Shariif hase yeeshee waxaa jira tuhun ku aadan in Itoobiya gacan saar hoose oo aan la shaacin ay la leedahay Gudoomiyaha Baarlamanka Shariif Xasan Sheekh Aadan, arimahaasi oo keenay in Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed uu kulankan xasaasiga ah la qaato Ra’isalwasaaraha Itoobiya.
Warar SBC ay ka heshay ilo lagu kalsoonsan yahay ayaa sheegaya in Sheekh Shariif uu ka codsadey Ra’isalwasaaraha Itoobiya in dawladiisu ay garab istaagto mowqifka dalwada KMG ah ee ku aadan arimaha dib u heshiisiinta, siyaasada iyo amaanka, isla markaana ay ka saacido xukuumadiisa dagaalka ay kula jirto kooxaha ka soo horjeeda.
Meles Zanawi ayaa la sheegay in uu aqbalay codsiga madaxweynaha, isagoo u balan qaaday in uu ka gacan siinayo wax ka qabashada amni darida ka jirta Soomaaliya iyo la dagaalanka xoogaga ka soo horjeeda dowladda KMG.
SBC International Adis Ababa
War yaa Alle yaqaan, war madaxweynuhu safar badanaa, maxaa ka lumay…